Home » Creative Writing » မမချွိ ဖျားနေသည် – KZ’s ထမင်းဆိုင်
ဆွေမျိုးမေ့ဆန်ပြုတ် (http://myanmargazette.net/36487 Posted by Ma Ma on Dec 13, 2010)
Wei Wei ရဲ့ ဆန်ပြုတ် အစီအစဉ် (http://myanmargazette.net/189215)
စမီးလေး ဒီရက်ပိုင်း နေမကောင်းဘူး . . . အာ့ဒေအကုန် ချက်ကျွေးမယ့်သူရှိရင် ကောင်းမှာပဲ
နာတို့ စားပုံကြည့်ပြီး ဖျားပြီဆို ရင် ဘယ်သူမှ သနားမှာ မုန့်ဘူးး
စဖျားတဲ့နေ့က Dom သာက်လိုက်တာ နောက်ရက် ချွေးတွေထွက်လို့ မနက်အစောရေလည်း ချိုးပြီး ဂတ်ဂတ်ဖြစ်သွားလို့။
နာ့ ကို သေကြောင်းကြံနေတယ် ကျန်း …. ယူအက်ကွန်ဆာ မြန်မာလစ်ဗျဲကြီးး
ဆန်ပြုတ်ကတော့ အရမ်းကြိုက်တဲ့အထဲမပါပါဘူး။ အပေါ်က မကြီး ချက်ထားတွေ စားချင်တယ်။
အမကတော့ လုံးဝမစားတဲ့ထဲ ပါတယ်။
ဒီပိုစ် print လုပ် မီးဖိုချောင် ကပ်ပေးပြီး ကြက်သွန်နီ ဂျို င်းကြား ညှပ်ချင်လာပြီ….
အဲဒီ နေ့ တညားကိုပြောပါ။
တကယ်နေမကောင်ဖြစ်ရင် ဘာမှကိုမစားးချင်ပါ ..
Take care My Dear! <3
ကောင်းသွားဘီ အရီးရေ စိတ်မပူနဲ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်ထဲကဖျားချင်ချင်
ကိုယ်ချက်ထားတာ အဲလောက်တောင် များခဲ့ပါလားလို့ ..
အခုဖြစ်နေတာက ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် စားလို့ကောင်းနေတာ ..